Common fahadisoana in CNC machining rafitra foibe servo - China Changzhou Zhanhang International
Araka ny fantatsika rehetra, ny machining servo rafitra foibe dia rafitra izay manome hery ny milina fitaovana. Raha tsy misy ny servo machining rafitra foibe, ny workpiece tsy azo tsinjaraina. Noho izany, ny rafitra servo no tena zava-dehibe ao amin'ny machining afovoany. Rehefa servo ho levona mandrakizay ny rafitra, ny iray manontolo dia tsy maintsy machining famokarana intsony. Ankehitriny, Xiaobian dia hampiditra ny fahadisoana fahita ao amin'ny machining servo afovoany rafitra.
Ny foibe machining servo tsy fahombiazan'ny rafitra fanairana fomba ahitana tondro sy nipoiran'io fitroarana tsofin'ny ny hafainganam-pandeha eo amin'ny isa rafitra fanaraha-maso sy ny fiarovana fanairana ho an'ny isan-karazany Hanketo Switches. Ny hevitry ny fanairana mpanondro miovaova amin'ny famolavolana ny rafitra fanaraha-maso ny hafainganam-pandeha. Amin'ny ankapobeny, misy ny karazana manaraka ireto:
1. Ny amin'izao fotoana izao dia lehibe, ka mahatonga ny milina fitaovana fanairana. A lehibe mitranga amin'izao fotoana izao fampitairana. Misy roa mety eo ambanin'ny toe-javatra ara-dalàna, izany hoe, ny fanairana lehibe amin'izao fotoana izao vokatry ny fahavoazana sy ny faritra fohy ny hery fiara singa eo amin'ny fanaraha-maso ny hafainganam-pandeha CNC vondrona ny machining foibe.
2. Avo malefaka ihany koa ny milina hiteraka fitaovana fanairana. Misy ankapobeny telo avo azo atao ho an'ny fanairana malefaka. Angamba ny CNC fahan'ny malefaka ny machining foibe mihoatra ny 10% ny laharana sarobidy, na ny insulation fanatanterahana ny servo maotera dia toy ny tsinontsinona, na ny avo malefaka vokatry ny andalana ny machining fandidiana haingana foibe fanaraha-maso ny rafitra.
3, ny malefaka iva loatra, ka mahatonga milina fitaovana fanairana, ny mety ho toy izany machining foibe dia tena tsy fahita firy, mety ho ny fahan'ny malefaka dia latsaky ny 85 isan-jato ny laharana sarobidy, na ny hery fifandraisana tsy tsara.
4. Ny hevitra lalana ny mamantatra hafainganan'ny Tapaka sy ny fanairana dia nahatonga. Io toe-javatra dia fanairana diso, satria ny seranam-piaramanidina tsy manana olana, ary misy olana ao an-mamantatra rafitra tamberina. Maro amin'ireo fanairana mitranga dia ny hafainganam-pandeha tamberina tsipika ny CNC servo maotera ny machining foibe. Tapaka na mahantra ateraky ny fifandraisana ao amin'ny mamantatra tamberina tsipika.
5. Ny fiarovana jiro dia mampiasa ny fanairana. Ny fiarovana jiro dia fitaovana ho an'ny fiarovana ny fitaovana milina. Ohatra, lehibe malefaka dia handoro singa sasany sy ny fepetra vonjimaika izay dia tsy azo fehezina ny milina fitaovana. Rehefa nihaona ireo toe-javatra ireo, ny fiarovana jiro dia mampandeha mba tsy ilaina Component simba, toy ny iray nijanona soa aman-tsara.
6. be loatra fanairana, ny antony mahatonga ny ny fanairana be loatra dia ny CNC milina enta-mavesatra ny machining foibe no ara-dalàna, na ny vatony ambony fari ny maotera ankehitriny eo amin'ny hafainganam-pandeha dia nametraka rafitra fanaraha-maso ny ambany loatra. Ny andriamby maharitra eo amin'ny maotera andriamby maharitra ihany koa ny hahatonga ny fanairana be loatra. Raha ny maotera ny machining raha tsy misy ny foibe no idling novakiny, dia ho sarotra ny hampiakatra azy amin'ny tanana na hanodinana ny lavaka, izay midika fa ny maharitra andriamby dia avelany tanteraka.
7. Ny nipoiran'io fitroarana CNC hafainganam-pandeha eo amin'ny fanaraha-maso ny rafitra foibe machining tsofina na ny faritra mpandika fitsangatsanganana.